वालपेपर "मार्बरग" चित्रकला को लागि - मुख्य मतभेद र peculiarities
भइसकेका विशेषता हार्डवेयर स्टोर को समतल ढाँचा मात्र कागज वालपेपर थिए जब दिन छन्। खत्म उत्पादनहरु को आजको दायरा एकदम हुर्किसकेका छ। त्यहाँ यस्तो वालपेपर चित्रकला को लागि "मार्बरग" को रूपमा मूल उपस्थिति र व्यावहारिकता, संयोजन, अनुपम गुण संग सामाग्री थिए। पक्कै, सादा कागज - यसलाई सस्तो र वातावरण सुरक्षित। तर यसको fragility र छोटो जीवन थप आधुनिक Vinyl वा आवरण गैर-बुना चयन गर्न धेरै उपभोक्ताहरु नेतृत्व गरेको छ।
भवन निर्माण सामाग्री उत्पादन कम्पनीहरु धेरै छन् र प्रत्येक अन्य यसको उत्पादन touted तिनीहरू सबै उछिन्ने छन्। तसर्थ, खरीदार कहिलेकाहीं यसलाई त्यहाँ विकास र पर्खालको लागि वालपेपर उत्पादन गर्ने कुनै मौलिक भिन्नता छ जस्तो देखिन्छ। "मार्बरग" - पछि एक ठोस इतिहास छ कि पुरानो जर्मन कम्पनी हो। फर्म मा काम व्यवसायी, आफ्नो घर को लागि नवीन समाधान को लागि स्थिर खोजीमा छन्। प्रसिद्ध कलाकार Ulf Moritz संग एक कम्पनीको सहयोग उत्पादन एक परिष्कृत र उच्च-टेक डिजाइन दिन्छ। धातु, Vinyl चिप्स, ग्लास: मास्टर साहसी सामाग्री को एक अविश्वसनीय मिश्रण प्रयोग गरेर रंग प्रयोग गरिरहेका।
रचनात्मक प्रकार चित्रकला को लागि सल्लाह गर्न सक्छन् वालपेपर "मार्बरग"। तिनीहरूले रंग धेरै पत्रहरु सम्म सामना गर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईं बस पर्खालहरु को छाया परिवर्तन गर्न सक्दैन। ऊन वेब-लागू यसलाई शीर्ष foamed Vinyl एक राहत सजावट मा मसी संरचना अवशोषित। सामाग्री यो संयोजन - प्यालेट एक प्रकारको। यो तपाईंलाई पनि frescoes को चतुर imitations सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। निर्माता curbs र जमीन वालपेपर एक विस्तृत दायरा सूची मा उपस्थिति को हेरविचार गरे। तिनीहरूले उत्पादित गर्दै छन् या त पहिले नै रंग वा स्पष्ट तिनीहरू सजाउनु हुनेछ विचार।
के अझ बढी लाभ उठाउन ग्राहकहरु वालपेपर रोजेको गर्ने "मार्बरग"? द्वारा पर्खालहरु painting सामान्यतया राम्ररी पङ्क्तिबद्ध गरिएको छ। Textured ढाँचा कपडा लुकाउने सानो सतह दोष को सक्षम छ, त्यसैले संख्या shpatlevanija चक्र न्यूनतम कम गर्न सकिन्छ। नयाँ घर को "दबाव" को प्रक्रिया मा उत्पन्न microcracks को उद्भव रोकिराखेको पर्खालहरु मा Nonwoven कपडा को reinforcing गुणहरू।
पारंपरिक समाप्त कोटिंग्स संग भन्दा सजिलो interlining संग काम। को टास्ने पर्खाल मा सिधै लागू गरिएको छ। को कपडे टास्ने संग गर्भवती सम्म प्रतीक्षा कुनै आवश्यकता छैन। गैर-wetted खनिज फाइबर भनेर चिस्यान चित्रकला लागि वालपेपर मा एक deforming प्रभाव छैन सुनिश्चित गर्नुहोस्। "मार्बरग" यसको सामाग्री गुणस्तर लागि प्रसिद्ध छ, तर विशेष गरी picky खरिदकर्ताहरूको लागि एक विशेष "विरोधी बर्बर" छ जो पाल्तु जनावर को पनि नंग्रा डराएका श्रृंखला, शुरू गरेको छ।
कारण यसको विशेष विशेषताहरु गर्न, चित्रकला लागि वालपेपर "मार्बरग" बाथरूम र भान्सा मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई सही मात्र पानी आधारित परिष्करण उत्पादन संग चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो एक उच्च चिस्यान प्रतिरोध र घर्षण प्रतिरोध अधिकार हुनुपर्छ।
साथै, जर्मन निर्माता को उत्पादनहरु मानिसहरूलाई बिल्कुल सुरक्षित छ। Interlining गैर-दहनशील सामाग्री लागू हुन्छ। उहाँले जो संवाददाता प्रमाणपत्रहरू पुष्टि हुन्छ, अहानिकारक छ।
साँघुरो प्रवेश हल को आधुनिक डिजाइन (फोटो)
खुला भान्सा संग कोठा जीवित - मस्यौदा चुन्छ
भित्री सानो अपार्टमेन्ट मा मचान शैली: दर्ता मा सल्लाह
ठाडो ब्लाइन्डहरू को लाभ
बालिका लागि कोठा - कल्पना को embodiment
को भित्री क्लासिक शैली
"Cliffhanger" - जो पेशी समूह मा एक व्यायाम?
Tenerife दक्षिण हवाई अड्डा र Tenerife उत्तर हवाई अड्डा
शुरुआती लागि प्रार्थना पढ्न कसरी
घन मा ट्रक को मात्रा
कसरी सुक्खा फोम? फोम को प्रयोग को लागि विनिर्देशों र निर्देशन
साइबेरिया प्रकृति: अद्वितीय कुनामा
लोकगीत - यो के हो? प्रमुख सुविधाहरू
एलिजाबेथ Ovdeenko - जीवनी र काम
"स्पार्टाकस" संग्रहालय, मास्को: तस्बिर, सञ्चालनको घण्टा
देशमा स्वामित्व। यो के हो?